RANT: Ndiani Muridzi Wako Domain? | Martech Zone
China, Gunyana 30, 2021 China, Gunyana 30, 2021 Douglas Karr
Nezuro, ini ndaive nebhodhi rekambani yedunhu uye isu tanga tichikurukura nezvekutama. Dzimwe nhanho dzaidikanwa dzaizoda kuti mamwe marekodhi edomain avandudzwe, saka ndakabvunza kuti ndiyani aigona kuwana DNS yekambani. Paive nekumwe kusatarisa, saka ndakakurumidza kuita a Whois kutarisa paGoDaddy kuziva kuti madomeni aive akanyoreswa kupi uye ndivanaani vaive mazita akanyorwa.
Pandakaona zvabuda, ndakavhunduka zvechokwadi. Bhizinesi harina kuita chaizvo pachake yavo domain kunyoresa, agency iyo yavaive vachishanda nayo yakaita.
Ngatitambei mutambo mudiki we chii kana.
Ko kana iwe uchida kugadzirisa ako maseru ekunyoresa marongero emamwe mapuratifomu iwe auchazobatanidza? Unofanira here bhadhara wako wechitatu-bato kugadzirisa chimwe chinhu chaunofanirwa kuve chako? Kambani iyi yakanyatsoita… uye iyo agency yakanga ichivachaja zvakare kudarika kunyoresa domeini kunodhura gore rega rega!
Ko kana rako bhizinesi dura kunyoresa inopera? Isu takaona izvi zvichiitika uye kambani inofanirwa kutsamwa kuti izive kuti ndiani muridzi wekambani uye kuti ivandudze kunyoreswa isati yanyoreswa nemumwe munhu.
Ko kana uine kubhadhara kukakavara kana gakava repamutemo nekambani iyo yakanyorwa seinyorese domain yako?
Ko kana iyo kambani yakanyorwa sewekunyoresa yako ichienda kunze kwebhizimisi kana zvinhu zvavo zvakaomeswa nechando?
Ko kana iyo kambani yakanyorwa sewekunyoresa inoremadza iyo email kero yakanyorwa semuridzi wekambani yekambani yako?
Ndizvozvo ... chero ipi yenyaya idzi inogona kukukonzera matambudziko! Mune ino chaiyo chiitiko, mutengi wangu akaisa mamirioni emadhora mune yavo bhizinesi 'brand uye yavo domaini chiremera online pamakumi maviri emakore apfuura. Kurasikirwa izvo zvaizokanganisa zvakanyanya bhizinesi ravo - kuunza zvese pasi kubva kune yavo yemakambani email kune yavo online kuvepo.
Nzvimbo yako yekutonga inofanirwa haana kuregedzerwa kune wechitatu bato… kusanganisira yekunze IT kambani kana agency. Sezvo iwe zvausingabvumire wechitatu-bato kuve yako yekutengesa reji kana yako imba mogeji, yako domain kunyoreswa yako chivakwa!
Maitiro Ekutarisa kumusoro Kwako Domain Kunyoresa Ne Whois
Whois ibasa iro rese makambani ekunyoresa maseru ane kwaunogona panyama kana zvakarongeka kutarisa kuve muridzi wedomeini. Ramba uchifunga kuti haazi ese ruzivo ari kuruzhinji. Makambani anokwanisa kumisikidza yavo seyakavanzika. Chero zvazvingaitika, kana iwe ukatarisa kumusoro kune yako domain ruzivo uchishandisa Whois, iwe unofanirwa kugona kuudza kana iri mune domain kunyoresa account iwe unayo (semuenzaniso. GoDaddy), kana kana iwe usingazive iro bhizinesi kana munyori ... tanga kuteedzera pasi ndiani anoziva.
Heano muenzaniso Ndiani mhedzisiro:
Mhedzisiro yeWHOIS Domain Name: martech.zone Registry Domain ID: 83618939503a4d7e8851edf74f2eb7d0-DONUTS Registrar WHOIS Server: whois.godaddy.com Registrar URL: http://www.godaddy.com Updated Date: 2019-05-15T19: 41: 47Z Creation Zuva: 2017-01-11T01: 51: 30Z Registrar Kunyoresa Kunopera Zuva: 2022-01-11T01: 51: 30Z Registrar: GoDaddy.com, LLC Registrar IANA ID: 146 Registrar Abuse Contact Email: abuse@godaddy.com Registrar Abuse Kusangana Runhare: +1.4806242505 Domain Status: clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited Domain Status: clientUpdateProhibited https://icann.org/epp#clientUpdateProhibited Domain Status: clientRenewProhibited https://icann.org/epp#client Mamiriro: clientDeleteProhibited https://icann.org/epp#clientDeleteProhibited
Kunyoresa Sangano: DK New Media
Registrant State / Province: Indiana Registrant Country: US Registrant Email: Sarudza Bata Domain Holder chinongedzo pa https://www.godaddy.com/whois/results.aspx?domain=martech.zone Tech Email: Sarudza Bata Domain Holder chinongedzo pa https. : //www.godaddy.com/whois/results.aspx? domain = martech.zone Admin Email: Sarudza Bata Domain Holder chinongedzo pa https://www.godaddy.com/whois/results.aspx?domain=martech.zone Zita Server: NS09.DOMAINCONTROL.COM Zita Server: NS10.DOMAINCONTROL.COM
Kana iwe ukaona kuti bhizinesi, email kero (es), kana iyo domain kunyoresa kambani yemunyori is subcontractor, agency, kana IT kambani iyo iwe yawakashandira kubata yako DNS, ita kuti ivo vachinje ipapo kunyoresa bhizinesi uye email kero dzokera kwauri uye uve nechokwadi chekuti WAKO Domain account yekunyoresa kwayakagadzirirwa.
Ramba uchifunga, yega domain kunyoreswa kune akasiyana mahukama akabatanidzwa ayo anotendera iwe kuti upe chako chekunze zviwanikwa kuwana kana kugona kuwana ziviso pane shanduko:
Anyoresa - ndiani muridzi wedomeini
Admin - kazhinji, mubhadharo wekubata kudomeini
Tech - wehunyanzvi wekubata uyo anotarisira iyo domeini (kunze kwekubhadhara)
Ndakaona makambani mahombe achirasikirwa nemazita avo nekuti havana kana kumboziva kuti ivo havana kuva kwavo pakutanga, yavo subcontractor yakaita. Mumwe wevatengi vangu aifanira kumhan'arira uye kuenda kudare kuti vadzore domaini yavo mumaoko avo mushure mekurega mushandi aende. Mushandi akatenga madomaini akaanyoresa muzita rake, asingazive muridzi wekambani.
Ini ndakabva ndagadzira email kukambani yeIT ndikakumbira kuti vaendese dura kune iyo account yaive nemuridzi wekambani. Mhinduro yavo yakanga isiri izvo zvaunotarisira… vakanyora vakananga kumutengi wangu uye vakaratidza kuti ndinogona kunge ndichida kubvarura kambani nekuisa madomains muzita rangu, chimwe chinhu ini haana zvakumbirwa.
Pandakapindura ndakanangana, ivo vakabva vandiudza kuti chikonzero chavakazviitira kwaive kutarisira domeini pakukumbirwa nemutengi.
Dai vakachengeta muridzi wekambani semunhu akanyoresa uye vakawedzera yavo email kero ye admin uye tech kuonana, ndinobvumira. Nekudaro, ivo vakachinja chaicho registrant. Kwete inotonhorera. Dai ivo vaive vachibhadharisa uye admin kuonana, ivo vangadai vakagona DNS uye zvakare vakatarisira kubhadhara uye kuvandudzwa. Ivo vaisada kushandura chaiko kunyoresa.
Rutivi runyorwa: Isu takazoona zvakare kuti kambani iyi yaibhadharisa nezve mazana matatu muzana kupfuura zvakajairika kunyoreswa kwenzvimbo, kwavakati ndiko kufukidza manejimendi avo echizinda. Uye ivo vaibhadharisa mari iyoyo mwedzi mitanhatu pamberi peyekuvandudza nguva yakatarwa.
Kujekesa, ini handisi kutaura kuti iyi IT kambani yaive neyakaipa ajenda. Ndine chokwadi chekuti kuwana kuzara kutonga kwevatengi vangu kunyoresa domain kwakaita kuti hupenyu hwavo huve nyore. Mukufamba kwenguva, inogona kunge yakatochengetedza imwe nguva nesimba. Nekudaro, hazvigamuchirwe kushandura iyo yakanyoreswa email paaccount.
Ko Kana Iwe UCHIDA Wechitatu-Bato Kuti Uchengetedze Yako Domain?
Kana yako domain registrar isinga vape zvebhizimusi maficha kwaunogona kuwedzera vanobatsirana kana mamaneja kudomain yako
Kune dzimwe nguva makambani anoda wechitatu bato kutonga yavo domaini, saka heino basa-kutenderedza. Ini ndinowanzo kuve nekambani inomisikidza kugovera email kero (semuenzaniso account@yourdomain.com) kuti ivo vanokwanisa kuwedzera kana kubvisa echitatu-bato email kero pa. Izvi zvinobatsira munzira dzinoverengeka:
Unogona kuwedzera uye kubvisa vatengesi pazvinenge zvichidiwa.
Wese munhu ari pane yekuparadzira runyorwa anovandudzwa kana paine chero shanduko kuaccount (kusanganisira password shanduko).
Pro tip: Usamise yako kero yemuridzi email kero ine iyo yakafanana domain seyako chaiyo domain! Kana dhairekitori rako rekodhi rekodhi rapera kana yako DNS ichichinja, zvichaita kuti zvikonere kuti iwe uwane maemail ziviso! Mabhizinesi mazhinji ane dome rinopfuura rimwe chete rine chekuita nebhizimusi ravo… saka simbisa account yekuparadzira rondedzero pane mamwe madomeni.
Zano Rangu reKambani Yako Domain Kunyoresa
Ini ndakaraira mutengi wangu kuti awane GoDaddy account, kunyoresa yavo domeini kune yakanyanya… makore gumi… uyezve wedzera iyo IT kambani semaneja kwavanogona kuwana iyo ruzivo rweDNS rwavaida. Sezvo mutengi wangu aine CFO, ini ndakamukurudzira kuti vawedzere iyo mvumo yekubhadharisa uye isu tikamuzivisa nezveakaundi iyi kuona kuti madomasi akabhadharwa kwenguva yakareba.
Iyo IT kambani ichiri kubhadharirwa manejimendi avo eDNS, asi hapana chikonzero chekuwedzera kuvabhadharira katatu zvakapetwa nemubhadharo. Uye, izvozvi hapana njodzi kune iyo kambani kuti yavo domaini iri kunze kwavo kutonga!
Ndokumbira utarise zita renzvimbo yekambani yako uye uve nechokwadi chekuti muridzi wacho ari pasi pekambani yekambani nekutonga. Ichi chinhu chausingafanire kurega kutonga kune wechitatu bato.
Tarisa Whois yeWako Domain
Tags: kuwana nzvimbodomain name serverdomain privacydomain registrationgodaddyndiani